A afọ iri ma ọ bụ abụọ gara aga, e nwere ndị nnukwu igbe nke ikodu ke ọ bụla dị ndụ n'ime ụlọ. Anyị hụrụ n'anya na-ekiri ha na ịchọgharịrị site na ole na ole ọwa na ha nọ dị. Taa, ndị na igbe gbanwee onwe ha na kpọgidere na mgbidi.
Ụzọ anyị na-ekiri TV agbanweela na otú nwere ngwa na-eme ka anyị enuba vidiyo si na PC na TV. TV na-ugbu a jikọọ internet na ndị ọzọ echeta karịa nnọọ ịbụ na onye iberibe igbe. Ị nwere ike ozugbo enuba video site na kọmputa gị ka gị na TV. Naanị ihe dị mkpa bụ TV ga-DLNA gbaara n'ihi na a TV bụ nnọọ ike nke na-anata iyi n'elu netwọk. N'ebe a, anyị ga-atụle otú iji VLC anyị nwere ike enuba media faịlụ ka TV.
Site Windows kọmputa
1. Iji malite gụgharia, ẹkedori VLC na kọmputa gị. Gaa menu na-aga enuba ịhọrọ media faịlụ na ị chọrọ iji strimụ.
2. Na-esote window, ị ga-enwe ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ iji strimụ. Ị nwere ike tinye otu faịlụ ma ọ bụ abụọ faịlụ.
3. Ugbu a pịa iyi. On iyi mmepụta, dị nnọọ ịhụ media isi iyi ị họrọ na pịa ọzọ.
4. ugbu a iji na ntọlite ​​ebe, ị nwere ike họrọ UDP ma ọ bụ iche na-aga na-adabere njikọ nke TV. Ọzọkwa, họrọ transcoding nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe usoro nke video.
5. Mgbe ị pịa, na-esote ezipụta iyi mmepụta eriri nke ngwaọrụ gị na-ezubere iche maka iyi, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla.
Mgbe na-eke a iyi eme ka n'aka gị TV na jikọọ na netwọk na ya ike ịhụ ngwaọrụ gị na netwọk. Ugbu a ego iyi si gị TV. The usoro ga-iche site n'aka otu TV ndị ọzọ na ụdị ngwaọrụ ji nweta internet. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ihe niile bụ ihe ziri ezi ị ga-enwe ike ịhụ iyi.
N'ihi na Mac
E nwere bụghị ọtụtụ dị iche si windows usoro ọ ga-abụ ukwuu n'ime otu dị ka windo. Otú ọ dị, ka na-gị na usoro ahụ ebe a bụ nzọụkwụ nke ga-enyere iyi media si gị Mac ka TV.
1. Ẹkedori na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na gị Mac na-aga Njikwa menu na-emeghe Stream.
2. Na-esote window, ị ga-enwe iji họrọ faịlụ i chọrọ iyi. I nwekwara ike ịgbakwunye sobtaitel site na-ahọpụta nhọrọ ibu sobtaitel faịlụ.
3. Ugbu a, họrọ iyi na-abanye na adreesị nke ezubere iche ngwaọrụ. Ọzọkwa, họrọ transcode nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe usoro nke faịlụ na ị chọrọ iji strimụ dị ka nhazi gị TV. Na njedebe, ị ga-enwe iji tọọ Stream ekwusa.
Ugbu a-iyi ga-abụ dị na gị DLNA gbaara TV jide n'aka na ọ na-ejikọrọ na netwọk na-ekwe ka iyi si na netwọk. Ọ bụrụ na o kwere omume na-agbalị iji a na njikọ n'elu elu ọsọ netwọk n'ihi iyi na video àgwà na-adabere na ọsọ nke njikọ Ịntanetị.
Jide n'aka na usoro nke faịlụ a na-akwado VLC na gị TV. Ị nwere ike iji ezi Ntụgharị dị ka Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata video na mgbe ahụ enuba ya na gị na TV set.
> Resource> VLC> Olee iji strimụ site VLC ka TV?